Nhau - DTS kushambadzira nzvimbo yekufamba yekudzidzira zviitiko zvinyorwa
NeSvondo, Chikunguru 3, 2016, tembiricha yaive 33 degrees Celsius, Vashandi vese veDTS Marketing Center nevamwe vashandi vemamwe madhipatimendi (kusanganisira Sachigaro Jiang Wei nevatungamiriri vakasiyana vekutengesa) vakaita dingindira rekuti "kufamba, kukwira makomo, kudya kuoma, kudikitira, kumuka, uye kuita basa rakanaka ”. Kufamba netsoka.
Panotangira chikamu chekudzidzisa ichi ikambani yemuzinda, nzvimbo yakatarisa pamberi pechivako chehofisi yeDTS Chikafu Industrial Equipment Co., Ltd .; yekupedzisira nzvimbo ndeye Zhushan Park yeZhucheng Guta, uye rwendo rwuchidzika gomo rwunopfuura makiromita makumi maviri. Panguva imwecheteyo, kuitira kuti kuwedzere kuoma kweichi chiitiko chekukwira uye kubvumira vashandi kuti vaswedere padhuze nemasikirwo, kambani iyi yakasarudza nzira dzakakombama mumaruwa.
Pakati peichi chiitiko chekufamba, pakanga pasina mota yekununura, uye vese vachienda, vashandi vazhinji vakafunga kuti havagone kumira, kunyanya vamwe vashandi, ivo vakaita pfungwa yekumira nepakati. Nekudaro, nerubatsiro rwechikwata uye nekusimudzirwa kwekuremekedzwa pamwe chete, vashandi makumi matanhatu nenomwe (kusanganisira gumi nevashanu vashandi vechikadzi) vakapinda muchirongwa vakasvika kuzasi kweZhushan Mountain, asi uku handiko kupera kwekudzidziswa kwedu, chinangwa chedu ndicho chepamusoro yegomo Kuti tisvike kugomo kamwechete, takazorora pazasi pegomo tikasiya tsoka yedu pano.
Mushure mekumbozorora zvishoma, timu yakatanga rwendo rwekukwira makomo; mugwagwa wekukwira waive nenjodzi uye wakaoma, makumbo edu aive ane shungu uye mbatya dzakanyoroveswa, asi zvakare takaona kuona kwaisaonekwa muhofisi, huswa hwakasvibira, makomo akasvibira uye ruva rinonhuwirira.
Mushure memaawa mana nehafu, takazosvika pamusoro pegomo;
Pamusoro pegomo, vanhu vese vakapinda mukudzidziswa vakasiya mazita avo pabanner rekambani, rinozokosheswa nekambani zvachose.
Panguva imwecheteyo, mushure mekukwira mugomo, Mutungamiri Jiang vakapawo hurukuro. Iye akati: Kunyangwe isu takaneta uye tichidikitira zvakanyanya, hatina chekudya kana chekunwa, asi isu tine muviri wakagwinya. Takaratidza kuti hapana chinogoneka nekushanda nesimba.
Mushure memaminitsi makumi matatu ekuzorora pamusoro pegomo, isu takatanga munzira yekudzika gomo ndokudzoka kukambani na15: 00 masikati.
Tichitarisa kumashure kwese iko kuita kwekudzidzira, kwaive nemanzwiro mazhinji Mumugwagwa, paiva nemumwe mukadzi mumusha uyo akataura zvawakaita pazuva rinopisa kudai, zvekuita kana ukaneta uye uchirwara; asi vashandi vedu vese vakangonyemwerera ndokuenderera mberi. Hongu, nekuti haina chekuita nekuneta. Chatinoda kubvumidzwa uye humbowo hwedu.
Kubva kukambani kuenda kuZhushan; kubva paganda rakanaka kusvika pakuvezwa; kubva kusahadzika kusvika pakuzivikanwa kwako pachako; uku ndiko kudzidziswa kwedu, uku ndiko kukohwa kwedu, uye zvakare zvinoratidza tsika yemubatanidzwa yeDTS, kushanda, Kudzidza, kufambira mberi, kugadzira, kukohwa, kufara, kugovana.
Kune vashandi vakanaka chete uye makambani akanakisa. Tinotenda kuti neboka rakadai revashandi vanoshanda nesimba uye vanoshingirira, DTS ichave isingakundike uye isingakundike mumakwikwi emusika mune ramangwana!